Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula 'lover ", iqabane iimvakalelo?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula 'lover ", iqabane iimvakalelo?
bhula get ziphicothwa 3500 yen mahala entsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa kwindawo 'lover "reverse uye Marseille version kunye version ubunzima, eziqhelekileyo ngokubanzi basondela kuguqulelo ubunzima obukhulu umthandi ikhadi iTestamente Endala ka-Adam noEva nabo iye yaba ngumba. Yindawo yokuhlala Uphahla lo zingelosi uMikayeli, phantsi kwayo Kukho amadoda kunye nabafazi ze.
umntu kufuneka isibheno uthando yomfazi ngqo Nijonge yomfazi, kwadalwa umfazi oko yamkela iimvakalelo zabantu, sinethemba yaye sifuna ukuva inyaniso Nijonge ingelosi enkulu ngubani na kwisilingi .
umgca osezantsi ze-zingelosi akukho nto yathi wajika iliso oyimfama, kodwa iingubo ngeentsiba ebomvu nemfusa, sele ngentetho evakalayo ukuba bathi "Kholwa iimvakalelo zakho." Okuthetha lover of the ikhadi isilingo ukulwa, imele nentembelo mna, ukutshiseka, umtshato kunye like. Ukuba ufumana
iqela uziva indawo ezintle the lover oko bekumele ukuba mean
lover of the ikhadi kwindawo echanekileyo, ithuba lokuba bakwazi ukukhetha ukhetho oluchanekileyo kwaye isiphumo echanekileyo. Ingubo Enkulu iintsiba ebomvu nemfusa limele iimvakalelo nyulu kunye nothando ngqo, ingelosi enkulu ezilandelayo inyani iimvakalelo zakho kwizithandwa, umthande, uxelela ukubaluleka trust ku . Abantu bobabini Ndicinga kubonakala ukuba siwazise ixesha olichitha neqabane lakho ngoku.
umtshato, njl kunokuba ucinga ngqo malunga ngabantu ababini elizayo, unalo iintlobo yokuqala izinto endifuna ukunandipha abantu ababini. Kwimeko zabantu ezingabuyekezekiyo uthando omnye umdlali usenokuba unomdla kuwe. Kubonakala ukuba ngethemba ukuze bachithe ixesha fun Emva kokuba ndiphume nani.
kufuneka babonise yacaca injongo kumdlali welinye icala, umdlali ngakumbi kuthi ukuba uziva nomtsalane, lwenza kube lula liphindaphindwe ilizwi. Ukuba sisondela kunye iimvakalelo inyani, kwakho ngokunyaniseka Kuyacetyiswa ngoko namamkelayo omhle ngayo.
Ukuba nezinye iimvakalelo zomntu
umthandi ikhadi kwindawo umva Kucingelwa ukuba kuthetha lover kwaphuma kwindawo reverse akayi kubonisa ukuba akukho iziphumo, njengoko ndicinga ukuba ujikeleze . Kwimeko babini Ndicinga abantu, elinye iqela kubonakala ukuba uzive ngaphezulu okanye umthwalo ngaphantsi ulwalamano kunye nawe. Elinye iqela amacandelo ukuba ndifuna ukuphelisa ulwalamano kunye nawe. Ukuba
ukuba kunokuba ndicinga Ndingathanda ukugcina ulwalamano lwakho, okanye bathethe elinye iqela nomkhwezeli ekubeni abe umdlali ekhathazekile. Nceda apha ukunika njengoko iwotshi ngobunono umchasi kunye nomonde. Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo ayibonakali ngathi ukuba inzala eninzi ngawe. Ngenxa akujonge ngayo kunye nemvakalelo yokuba omnye nabahlobo besini esahlukileyo zininzi, Kuqala kwinto zonke, nceda khangela bavane njengomhlobo.